Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Cusboonaysiinta Cusub: Tusaha Daawashada Whale ee Kanada ayaa lagu ganaaxay $ 10,000
Hagaha daawashada nibiriga ee xirfad-yaqaanka ah ee wabiga Campbell ayaa lagu ganaaxay $10,000 sida uu dhigayo sharciga Noocyada Khatarta ku jira si badheedh ah oo uu ula socdo nibiriyada dilaaga ah ee halista ah.
Bishii Sebtember 13, 2021, Maxkamadda Gobolka Campbell River, British Columbia, Canada, Xaakimka sharafta leh R. Lamperson wuxuu ka helay Nicklaus Templeman, milkiilaha iyo hawl wadeenka Campbell River Whale iyo Bear Excursions, oo ah dembiileyaal xadgudubyo hoostooda Noocyada Halista iyo Federaalka Xeerarka Kalluumeysiga.
Justice Lamperson ayaa ku amray Mr. Templeman inuu bixiyo ganaax dhan $5,000 xadgudub kasta, wadar ahaan $10,000. Waxa uu sidoo kale amray in lacagahan loo isticmaalo ilaalinta iyo ilaalinta naasleyda badda ee ku sugan biyaha ka baxsan British Columbia.
La Réunion ayaa si xawli ah ugu socota Seychelles ka hor hawada